Somaliland madaxweyne ma joogo Xalkuna waa MIIDAAN TAXRIIR by Abdi Mustafe‏
Somaliland madaxweyne ma joogo Xalkuna waa MIIDAAN TAXRIIR by Abdi Mustafe‏ 0 July 23, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 568
Somaliland madaxweyne ma joogo Xalkuna waa MIIDAAN TAXRIIR by Abdi Mustafe‏ Somaliland
kama qaalisana dalalka bur-buray ee xukun xumaantu baabiisay ee ay ka mid yihiin Ciraaq, Syria, Libya, Masar iyo Yemen. Silaanyo waa marfuuc al qalam oo denbi malaha ee kuwa ku xeeran baa dalka sidan u rogay. Waataa gobol walba laga hadlay ee denbiga xukuumada la saarayo. Bulshaduna way calaamad sanayaan cida xukuumada ku taageerta dulmiga iyo
doorasha diidaka ay wado. Xal aan ahayn Midaan Taxriir ma jiro. Maxaa Siyad Barre loola dagaalamayay hadii dowladan laga yeelayo inay ciidamo adeegsato. Shirku Beri wuu dhacayaa ee bal wax ha ka qabato. Xukuumadu dadkii bay isku dirtay waxaana waxa uugu wacan cid dowladii lagala xisaab tamo ayaan jirin oo Silaanyo meesha wuu ka baxay. TV ga ummada ha
kala hadlo haduu miyir qabo. Sidaa darteed bay Dhuxul iyo Cukuse iyo Xirsi u kacaa fadhiisiyaan Silaanyo oo waxay ogyiin in aannu waxba xasuusan karin. Amina Weris yaanay waxba indhaha la sii raac raacin aqalka madaxtooyada ee ay dhawaan ka bixi doonto. Abdi Mustafe No Comments yet... Print